ဆက်သွယ်ရေး Operator များ၏ Complain ဖုန်းနံပါတ်များ For Complain တတ်ချင်နေသာသူအားလုံးအတွက်.. - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home နည်းပညာသတင်း ဆက်သွယ်ရေး Operator များ၏ Complain ဖုန်းနံပါတ်များ For Complain တတ်ချင်နေသာသူအားလုံးအတွက်..
ဆက်သွယ်ရေး Operator များ၏ Complain ဖုန်းနံပါတ်များ For Complain တတ်ချင်နေသာသူအားလုံးအတွက်..
Thiha Htike at 9:24:00 PM နည်းပညာသတင်း,
ကျွန်တော် အားလုံးကို တစ်ခုတော့ အရင်ဆုံးပြောပါမယ် ကျွန်တော့်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး မေးမေးနေကြတဲ့ သူများ ထဲတွင် အမေးအများဆုံးကိုပဲကျွန်တော် တင်ပေးတာပါ Facebook ဆိုလည်း Facebook ပေါ့ အခုက ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းနံပါတ်တွေကို တောင်းတောင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်ပေးတာပါ complain တတ်ချင်ရင် ဘယ်ကိုဆက်ပြီး တတ်ရမှန်းမသိသောသူများအတွက် အချိန်ကုန်ခံပြီး ရှာထားတာပါ အခြားဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ အဆင်ပြေတာလေးတွေရေးပေးလိုက်ပါတယ် ဆက်သွယ်ရေးက ဒီဖုန်းနံပါတ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပြောရင်online မှာ official ရေးထားတာပါလို့ပြောလိုက်ပေါ့ တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် ပြန်မထူးရင် မဆဲလိုက်ပါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း အဆင်ပြေအောင်တင်ပေးထားတာမို့ ကျွန်တော့်ကို ဆဲတော့မဆဲလိုက်ပါနဲ့နော်..
Postpaid မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း၊ (နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး) ရှိ ငွေလက်ခံ ကောင်တာများ ၊ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် / တိုင်း မန်နေဂျာရုံး၊ ငွေစာရင်းဌာနများ တွင် သတ်မှတ်ထားသော ကြိုတင်ငွေ ပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပါမည်။ ကြိုတင်ငွေပေးရန် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း ၊ ငွေစာရင်းဌာန ၏ ဖုန်းအမှတ် (၀၁-၂၄၆၂၄၈) တွင် စုံစမ်းမေးမြန်း နိုင်ပါသည်။
Prepaid မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် မိမိသုံးစွဲလိုသည့် အခြေအနေအရ ကျသင့်မည့် Bill amount ကို ခန့်မှန်းကာ ကြိုတင်၍ ငွေဖြည့် ထားရန် လိုအပ်ပါမည်။ International Roaming စနစ် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း၊ ရုံးချုပ်အခြေစိုက် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးစခန်း၊ ရန်ကုန်မြို့ သို့ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက် ရပါမည်။အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ရုံးချုပ်အခြေစိုက် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးစခန်း ၏ ဖုန်းအမှတ် (၀၁-၈၆၀၄၉၇၇) တွင် စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်
မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးဌာန Customer Service Point များ
စဉ် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် ဖက်စ် e-mail
၁ နေပြည်တော် (၁၀၆) Complain Center, နေပြည်တော်စာတိုက်ကြီး ၀၆၇-၄၂၁၁၀၆
၂ ကချင်ပြည်နယ် ‌အောင်ဆန်းလမ်းနှင့် ဆမားလမ်းထောင့်၊ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးစခန်းရုံး ၀၇၄-၂၂၄၂၄
၃ ကယားပြည်နယ် ပြည်နယ်မန်နေဂျာရုံး၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ၀၈၃-၂၁၂၂၄
၄ ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံအော်တိုအိတ်ချိန်း ၀၅၈-၂၂၆၂၂
၅ ချင်းပြည်နယ် ပြည်နယ်မန်နေဂျာရုံး၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ၀၇၀-၂၂၅၅၅
၆ စစ်ကိုင်းတိုင်း လက်ထောက်အထွေထွေ မန်နေဂျာရုံး၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ မုံရွာ ၀၇၁-၂၂၅၅၂
၇ တနင်္သာရီတိုင်း တိုင်းဒေသကြီးမန်နေဂျာရုံး၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ၀၉-၄၂၁၀၀၀၀၂၆
၈ ပဲခူးတိုင်း (အရှေ့) ပဲခူးစာတိုက်ဝင်းအတွင်း၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ သနပ္ပင်လမ်း၊ ပဲခူးမြို့ ၀၅၂-၂၀၀၃၇၀
၉ ပဲခူးတိုင်း (အနောက်) ပြည်အော်တိုအိတ်ချိန်းရှိ BSC စခန်း၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ပြည်မြို့ ၀၅၃-၂၄၃၃၃
၁၀ မကွေးတိုင်း မကွေးအော်တိုအိတ်ချိန်း Complaint Centre၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ၀၆၃-၂၈၁၁၁
၁၁ မန္တလေးတိုင်း ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာရုံး၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ၀၂-၆၇၁၀၀
၁၂ မွန်ပြည်နယ် ပြည်နယ်မန်နေဂျာရုံး၊ စီးပွားရေးဌာနစိတ်၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ၀၅၇-၂၇၁၁၁
၁၃ ရခိုင်ပြည်နယ် အော်တိုအိတ်ချိန်း၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း စစ်တွေ ၀၄၃-၂၂၇၇၇ ၀၄၃-၃၃၈၈၉
၁၄ ရန်ကုန်တိုင်း တိုင်းမန်နေဂျာရုံး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၂၉၁၅၅၅
၁၅ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်) အော်တိုအိတ်ချိန်း၊ တောင်ကြီးမြို့ ၀၈၁-၂၀၀၀၀၀
၁၆ ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်) ပြည်နယ်မန်နေဂျာရုံး၊ လားရှိုးမြို့ ၀၈၂-၂၄၄၄၄
၁၇ ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့) ပြည်နယ်မန်နေဂျာရုံး၊ သစ်တစ်ပင်တောင်၊ ကျိုင်းတုံ ၀၈၄-၂၃၄၄၄
၁၈ ဧရာဝတီတိုင်း မိုဘိုင်းဌာနစိတ်၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ပုသိမ်မြို့ ၀၄၂-၂၃၇၉၇
MECTEL ဖုန်းများ၏ Complain ဖုန်းနံပါတ်များ
Telenor ၏ Complain ဖုန်းနံပါတ်များ
Call center for customer
Our call center is available for you 24/7. From Telenor numbers just dial 979 or 09790097900 from non Telenor numbers.
Call center for channel partners
Our call center is available 24/7 for our channel partners ( distributors/POS). Please call at 555/777 from Telenor number.
OOredoo ၏ Complain ဖုန်းနံပါတ်များ
call center is 234/ +959970000234